Russia kwụsịrị mmachi na ụgbọ elu Austria, Switzerland, Finland na UAE
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Russia kwụsịrị mmachi na ụgbọ elu Austria, Switzerland, Finland na UAE
Airlines • Airport • Austria na -agbasa ozi ọma • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Finland na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Akụkọ na -agbasa UAE
Russia kwụsịrị mmachi na ụgbọ elu Austria, Switzerland, Finland na UAE.
Russia ga -amaliteghachi ọrụ ikuku na mba itoolu ndị ọzọ, gụnyere Bahamas, Iran, Netherlands, Norway, Oman, Slovenia, Tunisia, Thailand na Sweden, malite na Nọvemba 9.
Ndị ọchịchị Russia kpebiri iwepu mmachi na njem ụgbọ elu na Austria, Switzerland, Finland na United Arab Emirates site na Nọvemba 9, 2021.
Ruo ugbu a, Russia amaliteghachila ọrụ ikuku na mba 62.
Akwụsịla ọrụ ụgbọ elu na Tanzania ruo November 1 n'ihi ọnọdụ ọrịa na mba ahụ.
Onye nnọchi anya isi ụlọ ọrụ mgbochi coronavirus gọọmentị Russia kwupụtara taa na Russian Federation ga -akwụsị mmachi na ụgbọ elu Austria, Switzerland, Finland na United Arab Emirates malite na Nọvemba 9, 2021.
Alexander Ponomarenko nke ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo International Airport na -atụle atụmatụ mmepe mmepe na bọọdụ
"N'ịgbaso nsonaazụ mkparịta ụka a na iburu n'uche ọnọdụ ọrịa na mba ụfọdụ, e kpebiri iwepu ihe mgbochi na njem ụgbọ elu na Austria, Switzerland, Finland na United Arab Emirates site na Nọvemba 9, 2021," onye ọrụ ahụ kwuru.
Russia maliteghachiri njem ụgbọ elu na Finland na ngwụsị Jenụwarị, 2021, ya na Switzerland-na ngwụsị Ọgọst 2020, ya na UAE-na mbido Septemba 2021, ya na Austria-n'etiti ọnwa June nke 2021.
Karịsịa, a ga -eme ụgbọ elu Bahamas n'etiti Moscow na Nassau (ugboro abụọ kwa izu), na Iran n'etiti Moscow na Tehran (ụgbọ elu atọ kwa izu), na n'etiti Sochi na Tehran (otu ugboro n'izu). Ọzọkwa, ụgbọ elu na -aga Netherlands n'etiti Moscow na Amsterdam (ugboro asaa kwa izu), n'etiti Moscow na Eindhoven (ugboro abụọ kwa izu), n'etiti St. Petersburg na Amsterdam, Zhukovsky na Amsterdam, Yekaterinburg na Amsterdam, Kaliningrad na Amsterdam, Sochi na Amsterdam (ụgbọ elu abụọ kwa izu n'ụzọ ọ bụla), ga -amaliteghachi.
A ga -eme ụgbọ elu Norway na Sweden ugboro abụọ kwa izu site na St. Petersburg ruo Bergen na Oslo, yana Stockholm na Goteborg. A ga -ebidokwa ụgbọ elu na Oman n'etiti Moscow na Masqat (ugboro abụọ n'izu), na Slovenia n'etiti Moscow na Ljubljana (ugboro atọ kwa izu), a ga -eme ụgbọ elu Monastir nke Tunisia site na Moscow (ụgbọ elu asaa kwa izu) na site na St. Petersburg (ụgbọ elu abụọ n'izu), na -enwe ike ịpụ ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu Russia ndị ọzọ, nke ebigharịrị ụgbọ elu mba ụwa (ụgbọ elu abụọ kwa izu n'ụzọ ọ bụla).
Ọrụ ikuku na Thailand ga -amaliteghachi ịtụle ihe obodo chọrọ, nke pụtara naanị maka ụmụ amaala Russia gbara ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus ọhụrụ. A ga -eme ụgbọ elu site na Moscow ruo Bangkok na Phuket (ugboro abụọ kwa izu), yana site na ọdụ ụgbọ elu Russia, nke ebidola ụgbọ elu mba ofesi (otu ụgbọ elu kwa izu na ụzọ ọ bụla).
Ruo ugbu a, Russia amaliteghachila ọrụ ikuku na mba 62. Akwụsịla ọrụ ụgbọ elu na Tanzania ruo November 1 n'ihi ọnọdụ ọrịa na mba ahụ.
Ụlọ ọrụ na-emetụta mmadụ
France debere Mauritius n'ọkwa ọhụrụ ya…
UNWTO bụ nke odeakwụkwọ ukwu: Echefuru na ...